सबैभन्दा प्रमुख मास्को विमानस्थलको
मास्को विमानस्थलको दोश्रो देखि शहर वरिपरि अर्धवृत गठन, टाढाको दूरी मा अवस्थित छ। यो बासिन्दा र अतिथिहरूको लागि धेरै सुविधाजनक छ। आधुनिक मान्छे आफ्नो समय र चाँडै अर्को एक बिन्दुबाट धेरै परिवहन एयरलाइन्स को सेवाहरूमा resorted छन् प्राप्त गर्न मोल।
मास्को विमानस्थलको। सबै भन्दा ठूलो नाम
बस 1910 मा निस्कनु गर्न, सुरु बेलूनिङ गर्दा पहिले मास्को विमानस्थल मा देखियो। अब राजधानी त्यहाँ जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश राम्रो सञ्चालन विमानस्थलको छन्। यो Vnukovo र Ostafyevo। Domodedovo, Chkalovsky, Sheremetyevo: Muscovites र आगंतुकों पनि मास्को क्षेत्र को प्रमुख हावा टर्मिनलहरु को सेवाहरू आनन्द।
Sheremetyevo, Domodedovo र Vnukovo: को मास्को क्षेत्र को मुख्य विमानस्थल तीन सबै भन्दा ठूलो हुन मानिन्छ। उनि सेवा घरेलू र विदेशी उडानहरू को सबै भन्दा। यी बुँदाहरू अत्यधिक पूर्वाधार विकास छन्। यात्रु कुनै पनि वर्ग र स्तर को आधुनिक खाद्य वस्तुहरू, प्रतीक्षा कोठा, सम्पर्क, lounges, पसल, पार्किङ, होटल को अंक को निपटान मा मास्को विमानस्थलको। सेवा यहाँ युरोपेली गुणस्तर स्तर पारस्परिक रहेको छ। विकलांग यात्रु विशेष सेवाहरूको हेरविचार अन्तर्गत छन्।
तपाईं एउटा यात्रा मा जाँदैछन् भने, सबैले एक मार्ग पूर्व-चयन गर्न, प्रयास छ पर्यटक र परिवहन कम्पनीहरु सेवा। सबैभन्दा पर्यटकहरु मास्को विमानस्थलको लोकप्रिय के हुन्? सूची Sheremetyevo खुल्छ। यो टर्मिनल युरोप मा सेवा को सबै भन्दा राम्रो गुणवत्ता को एक मानिन्छ। व्यस्त विश्वव्यापी शीर्ष 20 मा समावेश। हवाई अड्डा स्थान - राजधानी, Khimki जिल्ला, को मास्को रिङ रोड देखि 11 किमी, मास्को देखि 28 किमी को उत्तर-पश्चिम। नाम रेलवे Savelovsky नजिकै छ जो गाउँमा, आए। वरपरका संपदा 1917 सम्म Sheremetyev गणना गर्न belonged।
1953 मा, पहिलो रनवे जो त्यसपछि बारम्बार मरम्मत को छ, कमीशन थियो। 3550 मीटर - आज, आफ्नो चौडाइ 60 मिटर, लम्बाइ छ। दोस्रो रनवे 1976 मा बनाइएको थियो। 2008 मा पुनर्निर्माण पछि यसको चौडाइ 60 मिटर थियो र लम्बाइ - 3700. विमानस्थलमा जस्तै सपना लाइनर बी-787 र Airbus-380 यस्तो शक्तिशाली जहाज बनाउन सक्षम थियो।
1959 मा, लन्डन बाट फर्के थियो जो ख्रुश्चेव, Heathrow को सौन्दर्य संग खुसी थियो। नयाँ वायु सेना विमानस्थल मा उतरने पछि, टाउको यो ठाउँमा यस्तै विमानस्थल बनाउन आवश्यकता बारेमा कुरा सुरु भयो। यो एक उर्दी रूपमा देखेको थियो। पहिले नै 1957 मा त्यहाँ Sheremetyevo हवाई अड्डा संगठित भएको थियो। Leningrad को अगस्ट मा यात्री तू-134 पारित भएको थियो छ। 1960 मा AEROCOMPLEX पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति प्राप्त। 70 वर्ष यहाँ सालाना बारेमा एक लाख यात्रु गर्दछ। विमानस्थलमा देश मा सबै भन्दा ठूलो थियो। 1985 मा, यो आंकडा एक वर्ष 3.5 मिलियन मानिसहरूलाई पहिले नै पुगेको थियो। यो जटिल निरन्तर अद्यावधिक छ, नयाँ टर्मिनल निर्माण गरेका थिए।
प्रारम्भिक 21 औं शताब्दीमा यो ठूलो ब्यान्डविथ प्रदान गर्दछ जो हवाई गर्न बेलारूसी W / रेल स्टेशन सामेल निर्णय भएको थियो। 2008 मा, द्वारा Savelovsky स्टेशन अनुमति Aeroexpress, यो केवल 35 मिनेटमा विमानस्थलमा प्राप्त गर्ने मौका दिनुभयो। Sheremetyevo अब वार्षिक यात्री यातायात परिणामस्वरूप एक वर्ष 64 लाख मानिसहरूलाई वृद्धि हुनेछ, तेस्रो CDW निर्माण योजना छ।
Domodedovo विमानस्थल टर्मिनल - को मास्को विमानस्थलको Enumerating, यो सबै भन्दा ठूलो मध्ये एक टिप्पण लायक छ। यो संसारको व्यस्त शीर्ष 20 मा समावेश गरिएको छ। रूस मा यात्री यातायात Forefront छ। यो 80 कम्पनीहरु संग 240 क्षेत्रमा काम गर्छ। भौगोलिक दक्षिण-पूर्व, 45 राजधानी र मास्को रिङ रोड देखि 22 मी देखि मी स्थित। यहाँ, अप्रिल 7, 1962 1963 देखि माल, हुलाक, प्रशिक्षण उडान भयो - विमानस्थलमा को जन्म आधिकारिक मिति यसको निर्माण पूरा दिन मानिन्छ छ।
पहिलो यात्री उडान Sverdlovsk मा 1964 मा भयो। को 1962nd नियमित यात्री सेवा स्थापित भएको थियो। Domodedovo विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय स्थिति 1992 मा भएको थियो। 1997 मा, वार्षिक यात्री यातायात 4.5 मिलियन मानिसहरूलाई वृद्धि। 2000 मा उनले टर्मिनल को एक पूर्ण नवीकरण गरे। 2004 देखि 2008 को, उहाँले यात्री टर्मिनल विस्तार। को 2011th Domodedovo विमानस्थल जटिल पूर्वी युरोप मा सबै भन्दा राम्रो रूपमा मान्यता थियो।
Vnukovo हवाई अड्डा को सूचीमा समावेश गरिएको छ "सबैभन्दा प्रमुख मास्को विमानस्थलको।" उहाँले शहर गर्न घनिष्ठ छ, मास्को रिङ रोड देखि 10 किमी, 28 किमी केन्द्र देखि दक्षिण-पश्चिम। यसको फाइदा यसलाई समुद्र स्तर माथि 205 मीटर मा स्थित छ भन्ने छ। यो गर्दा खराब मौसम मा लैंडिंग एक फाइदा छ। कुहिरो र गरिब दृश्यात्मक मा, टर्मिनल एक लाभप्रद स्थिति छैन। Vnukovo अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा स्थिति छ र माल र यात्री सेवाहरू दुवै commits।
द्वितीय विश्व युद्ध को दिन देखि विमानस्थलमा संचालित, त्यहाँ मास्को उड्डयन को मुख्य शक्तिहरू थिए। युद्ध पछि, 1945 मा, यहाँ मुख्य नागरिक विमानस्थल सारिएको थियो। 1980 यात्री ट्राफिकको 1976 देखि 30 लाख मान्छे पुगेको छ। पहिले नै 2001 मा, हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति प्राप्त।
मास्को सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल, जो को ठेगाना सबै लागि परिचित छन्, यात्रु लागि ओसारपसार गर्न सजिलो पहुँच भित्र छन्। यात्रा गर्दा धेरै केही तनाव, विमानहरु, रेल लागि लेट हुनुको डर अनुभव छन्। यो जानिन्छ, आधुनिक राजधानी मा ट्राफिक जाम, जो समयमा घण्टा खडा गर्न सक्छन् को धेरै उत्पन्न। थप र थप मान्छे भूमिगत सेवाहरूमा रिसोर्टमा किन छ। यो विमानस्थल गर्न भूमिगत केही मिनेटमा पुग्न सकिन्छ।
Sheremetyevo। निकटतम मेट्रो स्टेशन - "नदी स्टेशन"। त्यहाँ बस देखि। अर्को विकल्प - मेट्रो स्टेशन "Belorusskaya" Aeroexpress Belorussky देखि रेलवे स्टेशन हरेक आधा घण्टा छोड्नुहोस्। 35 मिनेट प्राप्त गर्नुहोस्।
Domodedovo। मेट्रो "Domodedovo" शटल बस स्टेशन बाट चल्छ। अर्को विकल्प - 1 घण्टा र 15 मिनेट तपाईं Aeroexpress लिन लागि मेट्रो स्टेशन "Paveletskaya" Paveletsky स्टेशन मा।
Vnukovo। मेट्रो "दक्षिण पश्चिम", त्यसपछि बसें र ट्याक्सी। अर्को विकल्प - कीव रेलवे स्टेशन। यसैले हरेक घण्टा Aeroexpress पठाए। बाटो मा समय को एक घण्टा खर्च हुनेछ।
"थाई एयरवेज"। आधिकारिक वेबसाइट
Yelizovo हवाई अड्डा: विवरण, स्थान, सेवा
एक आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल "बेल्गोरड"
एक हावा खल्ती के हो? एक विमान मा उडान
सपना पुस्तक, आउनुहोस्, बताउन! किन मरेको मानिसको सपना?
वेल्डिंग पलटनेवाला ड्राइभिङ। वेल्डिंग को पलटनेवाला को योजनाबद्ध रेखाचित्र
"केन्यार्मर्म", जेल: संकेतहरू, प्रयोगका लागि निर्देशन, एनालॉगहरू, समीक्षाहरू
कसरी बाहिर एक निजी घरमा पर्खालहरु ढाक्नु गर्न? यो राम्रो बाहिर बाट घर ढाक्नु?
फोहोर कपाल लागि Hairstyles। कसरी पनि शक्ति majeure को अवस्थामा सिद्ध हेर्न?
अलेक्जेन्डर Gomelsky - सोभियत बास्केटबल प्रशिक्षक: जीवनी, परिवार
धेरै द्रुत जरा मा फोहोर कपाल प्राप्त: समस्या सुलझाने लागि सम्भव कारण र प्रभावकारी तरिका
निर्माण Kislogubskaya PES। समुन्द्री शक्ति स्टेशन
हिन्दू धर्म मा माउन्ट Meru
Kombucha: तयारीको र हेरविचार